Munamato wekukwezva murume. ? Kurumidza uye nepfungwa.
Munamato wekukwezva murume Inogona kutsoropodzwa kwazvo asi inoshanda zvakanyanya uye zvine simba.
Iwo munamato usina kuitirwa kuitirwa vakadzi chete, kunyange hazvo vari ivo vanoshandisa chombo ichi zvakanyanya kurwira hukama ihwohwo hwerudo hunoda kupindira kwaMwari.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti hazvifanirwe kutarisira kuti hukama huchadzikira mukati mawo hwese kuti uite munamato uyu asi zvinogona kuitwa kubva kune yekutanga zviratidzo kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka.
1 Munamato wekukwezva murume anomhanya
2 Munamato wekuda murudo nemurume ane pfungwa
3 Munamato wekurasa moyo kwemurume mumasekondi
3.1 Chii chiri munyengetero uyu?
3.2 Ini ndinogona kutaura minamato yose here?
Munamato wekukwezva murume anomhanya
«Mweya Mutsvene, iwe uyo kupfuura chero ani zvake anoziva simba remweya wangu ...
Ini ndinokumbira kuti utarise chikumbiro changu, kuti nesimba rako unondiita kuti ndiswedere (zita remudiwa), kuti munhu iyeye anonzwa hunhu hwangu hwese uye anodonhedzwa pamberi pavo, ndinokukumbira, Mwari Mutsvene kupfuudza kuda kwake uye kuti chishuwo chake chive kuva neni padivi
Nditarise uye unzwe rudo rwangu rwese uye kuzvipira kwaari.
Anodiwa Mweya Mutsvene, mutongi wemweya, ndinokukumbira kuti uuye kwandiri, ndinokumbira rubatsiro rwako rune simba kuti upindure munamato wangu ...
Ini ndinokubvunza iwe kuti rudo rwake harusisina hanya neni, kuti asandidzivise, kuti agare akagadzirira kutaura neni, kuti masimba anorangana chete mandiri ...
Ini ndinobvunza iwe, dai murume anokuda auya kwandiri uye simba redu rive chete, simba rako ngarive rinondibatana nemurume iyeye wandinoda zvakanyanya.
Nezve rudzikinuro rwe rudo rwe rudo rwekudenga mweya wedenga, ndipe ini simba rinodiwa kuti munhu iyeye andide, unoziva mweya yedu uye nhasi ndiyo nguva yekuti uzviise pamwechete ...
Ini ndinokuvimbisa nemoyo wangu kuti unomuda, izvo (mudiwa) anogara achifara neni, kuti hazvingazovipo zvakakwana kana kusuwa mumoyo make kana zvichienderana neni.
Nhasi uno mweya mutsvene ndinokukumbira neshungu kwazvo zverudo rwako nekambani. Ameni "
Zvishuviro zvedu ngazvive izvo simba remukati rinotitungamira kuti tibvunze zvakadzama chii chinopisa semurazvo mupenyu mukati medu.
Iye uyo murume uya anodzoka nekukurumidza Zvinotivimbisa kuti manzwiro emurume iyeye anogona kununurwa zviri nyore nekuti hatina kupa nguva yekuti moyo wake wakasvibiswa nevamiriri izvo zvinogona kukanganisa kana kukanganisa chinangwa chatinoshuvira.
Haisi iyo yechando kana chishuwo chakazvarwa kubva mukudada asi iri yekununura imba, mhuri, hukama huri panjodzi yekupera zvachose.
Kana mumwe wevanhu vaviri achiri kuda kuti hukama uenderere mberi, saka zvese zvinogoneka.
Munamato wekuda murudo nemurume ane pfungwa
«Mwaka werudo wasvika.
Mwoyo unomuka zvakare ndinotora dangwe rangu uye ndinotora divi nekuzvishingisa, kugona kwangu kugona uye kurarama mukumbundirwa kwerudo.
Ndakamboita matambudziko nerudo munguva yakapfuura.
Moyo wangu warwadziwa. Pane imwe nguva ndanga ndiri ndega, ndakatsamwa, ndisina kugadzikana, ndakasuruvara uye ndichinetseka.
Ini ndaitenda kuti zvaisaita kuwana yechokwadi, inogara uye inobata rudo.
Asi ini ndinosarudza kurapa izvi izvozvi.
Ini ndinosarudza rudo uye ndinosarudza kuwana rudo rwangu rwechokwadi.
Munguva dzino dzatinopokana nezvikwapuro zvedu kana kupi hatina hukama hwenyama nemurume iyeye Isu tinogona kugadzira munamato uyu une simba kuitira kuti kubudikidza nekubatana kwepfungwa kana kwemweya izvo kunzwa kwe rudo kunotanga kukura.
Izvo zvinogona zvakare kushanda muhukama ihwohwo kure, kuchengeta pfungwa dzemurume iyeye achigara achifunga nezvedu zvinogona kutibatsira zvakanyanya uye zvinogona kumuita kuti awire asina tariro murudo.
Munamato wekurasa moyo kwemurume mumasekondi
«Simba rekusaziva, ndinokumbira iwe nhasi kuti undibatsire, kuora mwoyo kwashanduka kuita mweya, nhasi ndinokukumbira iwe, mweya waDon Juan da Conquista undibatsire, mweya werudo, huya kwandiri, mweya waSanta John mucheri, mhanya kundibatsira, mweya une simba wemhepo ina, nzira nenzvimbo.
Mhepo ine simba uye yakaringana yeMutsvene Mako waLeon, ane simba uye akatsamwa Musande Marita, mweya weVamwari weSanta Helena Kubva kuJerusarema.
IwoMweya weMutsvene weMuponesi weHorta, Mweya waMariya Musoro, mweya une simba weMuponesi weHorta, mweya izere nekunaka uye nerunako, nhasi ndinokumbira rubatsiro rwako, ndinokumbira ndokuraira kuti undibatsire.
Tenzi wemanzwi mashanu, mifungo yekutonga, kuda uye mweya mupenyu, nhasi ndauya kuzokubvunza, kuti undibatsire tenzi: (zita remunhu iyeye) Ndinobvunza Musande wezuva rino.
Ini ndinobvunza musande wezuva rakazvarwa munhu uyu uye nezuva remutsvene randakazvarwa.
Mutumwa wangu anochengetedza, kumutumwa wake anochengetedza.
Ini ndinogadzira kenduru iyi kuti mupfungwa make hapana kana chimwe chinondibata, kuti muviri wake unondida, kuti nhengo yake yebonde inongo fara neni, kuti musoro wake unongofunga nezvangu, kuti maoko ake anongoda kubata muviri wangu, kuti wake tsoka dzinongoda kufamba kwandiri, kuti pfungwa dzako, kutonga uye kuda, zvive zvangu chete.
Ndipeiwo mweya we simba rekugona kwake, iye (zita remunhu) anondifunga chete, anondida uye ndinongomufarira chete, kana vatsvene ini ndinongomukumbira kuti andibatsire uye andipe rudo rwake nekuti ini ndakafanira. ”
Uyu ndiwo munamato unofanirwa kuitwa nekuremekedzwa uye nekuziva kuti inyaya inonzwisa tsitsi yatiri kuzobvunza.
Kushuva murume uye zvakare kuti tizviite mumasekonzi chete zvinoda kuti tiise masimba edu ese pane zvatinokumbira uye, kunyanya kukosha, kuti tinobvunza tichiziva kuti izvo zvatinoda zvinowanikwa chete nekuita munamato uyu.
Kutenda kune simba, nekuti zvinoenderana nekushanda kweizvi uye minamato yose kuti isu hatingaite zvisinei nezvatiri kukumbira.
Minamato yekurasa moyo kwemurume mumasekondi kana vachishanda uye vane simba kwazvo.
Izvo hazvisi zvemashiripiti kana chero kutuka kunoiswa, kana isu kutsvaga kutsvaga kwehana yeumwe munhu zviri nyore kwedu, zvatiri kubvunza ndezvekuti murume uyu anogona kuona hunhu hwese hwatinahwo uye anopenga kuti ave nesu.
Uyu uye mimwe minyengetero yose inoshumira zvinhu zvakawanda, imwe yacho pasi rose ndechokuchengetedza kutenda kwedu.
Mune ino kesi chaiyo tinogona kuve nemimwe yakakosha kukumbira.
Izvo zvakakosha kuti tizive kuti tinogona kuita munamato uyu kune ekunze zvimiro senge zvakasikwa kana kune vamwe Mwari asi isu tinokwanisawo kuzviita isu pachedu, kune zvatiri nechomukati.
Chinhu chakakosha kusangana chakasarudzika kubatana ne nyika zvemweya zvinova ndipo panorwirwa hondo chaidzo.
Tinogona tobva takumbira rudo rwedu rwehukama, yemurume iyeye akatifuratira uye asingade kudzoka, tinogona kukumbira rudo kuti ruzvarwezve mumoyo make uye toda kudzokera kumba iyo yaakasiya.
Ehe, minyengetero yese yatinoda inokwezva simba rakanaka kwatiri uye nekuchenesa nharaunda yemweya inotitenderedza.
Ichi chikomborero chatinogona kutanga kunakidzwa nacho kubva panguva yatinotanga kuita minamato yedu.
Zvinokurudzirwa kuti tinamate zuva nezuva uye tizviite kubva pakadzika kwemweya, tichitevera munamato wakasarudzika kana kushandisa mazwi edu uye nekutenda kukuru.
Iva nekutenda mumunamato wekukwezva rudo rwemurume.